Facebook တွင် သူငယ်ချင်း ချစ်ခင်မှု ပွားရန်
ပို့စ်တင်ချိန် - 4/07/2014 03:19:00 PM
လူတိုင်းကတော့ မပြီးပြည့်စုံကြပါဘူး။ အချို့ တွေဆိုရင် အပြင်မှာခင်ရတာနဲ့ Facebook မှာခင်ရတာနဲ့ မတူညီ ကွဲပြားတာတွေ သိသိသာသာ ကိုရှိတတ်ကြ ပါတယ်။ အချို့ ကျတော့ Facebook မှာ သဘောကောင်းပြီး အပြင်မှာ သူမဟုတ်သလို၊ အချို့ ကျ Facebook မှာ အပြောအဆို အပေါက်အလမ်းဆိုးပြီး အပြင်မှာကျ ဘုရား တပည့်တော်လိုလို အစရှိသဖြင့် Real world နဲ့ Virtual world ကွဲပြားမှု များစွာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေ ပါစေ Facebook မှာတော့ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းကောင်း၊ Facebook မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်ဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကို သိသလောက် ရေးသား မျှဝေ ပေးလိုက်ရပါတယ်။
၁။ သူငယ်ချင်းကောင်း ပရိုဖိုင်ပုံကို Like/ Comment ပါ။
ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ အပြင်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ခင်ကြတယ် ပြောပြော၊ Facebook ပေါ်မှာတော့ ကိုယ့်အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းကပေးတဲ့ Like လေးတော့လိုချင်ကြတာပဲလေ။ Comment ဆိုရင် အတိုင်းအထက် အလွန်ပေါ့။ သာမန် တင်နေကျ album တွေ၊ Wall photo တွေ၊ Cover photo တွေကတော့ ထားလိုက်တော့။ ကြာကြာနေမှ တစ်ခါပြောင်းခဲတဲ့ Profile picture လေးတော့ Like လုပ်ပေးလိုက်ရင် အော် ဒါဟာ င့ါသူငယ်ချင်းတွေ င့ါကို ဂရုစိုက်နေသေးတာပဲလို့ သူ့ကို ခံစားစေပါတယ်။ ပရိုဖိုင် ပုံမဟုတ်ပဲ အခြား ဓာတ်ပုံတွေ ကိုဆိုရင်လည်း ကြုံရင်ကြုံသလို Like, Comment လေးတွေ ပေးနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
၂။ ၂၀၀၉ က ပုံများ ကို Like/ Comment ရှောင်ပါ
၂၀၀၉ ကိုပဲ မဆိုလိုပါဘူး။ တင်ထားတာ တစ်နှစ်လောက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့ Friend ဖြစ်တာ ကလည်း အတော်ကြာနေပီကို ခုမှ တစ်ရေးနိုးပြီး Like ပေးတာတွေ၊ comment ပေးတာတွေက ရှိတတ် ပါသေးတယ်။ ဒါက အမှန်တော့ သူဘာပဲလုပ်လုပ် မသိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဆိုတာ အပြင်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Facebook မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စကားမပြောဖြစ်ရင်တောင် သူဘာတွေလှုပ်ရှားတယ်၊ တင်တယ်ဆိုတာလေးတော့ အကြမ်းဖျင်း သိသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ အတော်ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ပုံတွေကို တစ်ရေးနိုး Like, Comment ကို ရှောင်ကြဉ်သင့် ပါတယ်။ ဒါဟာ ဂရုမစိုက်တဲ့ သဘောကိုလဲ ပြပါတယ်။
၃။ Message စာ ခပ်မြန်မြန် ပြန်ပါ
ဘယ်သူ့ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ Facebook မှာ ခင်လာပြီဆိုရင် Chat ထဲမှာ စကားပြောဖို့ ကြုံတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကစပြောတာ မဟုတ်ပဲ သူ့ဖက်က စပြောလာရင် ချက်ချင်း တုန့်ပြန်ပြောနိုင်ရပါမယ်။ ချက်ချင်း ဆိုတာ အဲ့ဒါကိုပဲ စောင့်ကြည့်ဖြေခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်သားအနေ နဲ့ စောင့်နေတာ မကြာလောက်တဲ့ အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း ချက်ချင်း တုန့်ပြန်ပြောဆိုပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က ပြောလိုက်ပေမယ့် သူ့ဘက်က ဘာမှပြန်မပြောလာရင် ဒါသူ ဘာအထှာကိုင်တာလဲ ဘာညာနဲ့ထင်စရာရှိ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က မအားဘူးဆိုရင်လည်း မအားကြောင်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး စာတစ်ကြောင်းလောက်ချိန်ပြီး အသိပေး ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ Facebook မှ သူငယ်ချင်းများက ကိုယ့်အတွက် သူအချိန်လေးတော့ ပေးရှာသား၊ စကားလေးတော့ ပြော ရှာသား ဆိုပြီး ခင်မင်မှု မပျက်ယွင်းစေပါတယ်။ တစ်ဖက်က စာပို့လိုက်ပြီး တော်တော်နဲ့ ပြန်မရောက်ရင် နောက်တစ်ခါ စကားပြောဖို့ လည်း ရှောင်သွားတတ်ပြီး သူငယ်ချင်းလျော့တတ်ပါတယ်။
၄။ Facebook ပေါ်တွင်ရန်ဖြစ်ခြင်း ရှောင်ပါ
အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ Facebook ပေါ်မှာ ရန်ဖြစ်နေကြတာ ကြည့်ရ အင်မတန် ဆိုးပါတယ်။ ဘယ်လို အကြောင်းတွေကြောင့်လည်း မသိ Status တွေတင်၊ Comment တွေ ဝင်ကြဲနဲ့ တစ်ယောက်အနာ တစ်ယောက် ဆွနေကြတာ ဘေးလူအမြင်လည်းမကောင်းသလို၊ သူ့အချင်းချင်းတွေလည်း မကောင်းပါဘူး။ အပြင်မှာမဟုတ်ပဲ အွန်လိုင်းမှာ ရန်ဖြစ်တာက စိတ်ထဲမှာ ပိုစွဲကျန်ပြီး မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင့် လျော့တတ်ပါတယ်။
၅။ သူငယ်ချင်းအကောင့်မှ ပေါက်ကရ မလုပ်ရ
အချို့ က ဒါကို ပျော်စရာ နောက်စရာ တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ သို့ပေမ့ယ် ဒါက မလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ရပ် တစ်ခုပါ။ သူငယ်ချင်းအကောင့် Log out မလုပ်ပဲ ကျန်နေတာမျိုးကို ဝင်ပြီး ပေါက်ကရ Status တင်တာတွေ၊ ပုံတင်တာတွေ၊ စာပို့တာတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါက လည်းခင်မင်မှုကို ပျက်ယွင်းစေပါတယ်။
၆။ Relationship မှ Single ပြောင်းလဲမှုကို Comment မပေးပါနဲ့
ဒါကလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တစ်ဖက်က အရမ်းခံစားနေရပြီး Relationship ကနေ သို့မဟုတ် အခြား Status တစ်ခုကနေ Single ကို ပြန်ပြောင်းတဲ့အခါ ကွန်းမင့် box ကနေပြီးတော့ ဘာဖြစ်တာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ သွားမေးတာက သူ့အနာကို ဆွတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒီတော့ ဒါကိုလည်း ရှောင်သင့်ပါတယ်။
၇။ ပေါက်ကရ သွား မPost ရ
ကြိုက်မှန်းမသိ၊ မကြိုက်မှန်းမသိ “သားရီး။မင်းမနေ့က မူးတာပြေသွားပြီလား” “hey, ယူတို့မနေ့က Night club သွားတယ်ဆို’ ဘာညာနဲ့ ကိုယ်ကတော့ ခင်လို့တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့ဘက်က မြင်မကောင်းတဲ့ သူတွေရှိရင် ပြဿနာကြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပေါက်ကရ သွား Post ဒါကိုလည်းရှောင်သင့်ပါတယ်။
၈။ သိပ်မခင်သူကို Poke ခြင်း မပြုရန်
ကိုယ်နဲ့က ဘယ်လိုမှမသိဘူး။ Mutual Friend လည်းမရှိပဲနဲ့ သွားသွား Poke တာမျိုးတွေ ရှောင်သင့် ပါတယ်။
၉။ လူစိမ်းကို Friend request မလုပ်သင့်
လူစိမ်းဆိုလို့ လူစွမ်းကောင်း Hulk ကိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ လုံးဝမသိမကျွမ်းတဲ့သူတွေပါ။ သူက Celebrity ဖြစ်နေလို့ Add တယ်ဆိုရင်ထားလိုက်ပါတော့။ ဒါကလက်ခံလို့ရပြီး ခင်နိုင်ပါတယ်။ သာမန်လူအချင်းချင်း ဖြစ်နေပြီး Add ရတဲ့အကြောင်းကို Chat box မှာမေးတော့လည်း အင်းမလုပ်အဲမလုပ် ဆိုရင် ဒါမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ဒီအကျင့်လည်း ရှောင်ရပါမယ်။
၁၀။ သူငယ်ချင်းအတွင်းရေးများ ဖောက်သည်မချရ
ကွယ်ရာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Facebook ပေါ်မှာ ပေါ်တင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းရဲ့  အားနည်းချက်တွေ၊ အတွင်းရေး တွေ၊ သူမသိစေချင်တာတွေကို Status မှာကော၊ comment မှာကော၊ Chat box မှာကော ဖောက်သည်ချနေရင် ဒါက အင်မတန် ဆိုးရွားတဲ့အမူအကျင့်ပါ။ အဲ့လိုလုပ်ရပ်မျိုးက လုံးဝ (လုံးဝ) ရှောင်ကြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်များ အစည်းအရုံး၏ တန်ခူးရင်ခွင် သ...
တစ်ကိုယ်လုံးအရိုးများ ပေါ်လာသည့်တိုင် အသက် (၅) နှစ်...
ကျုံးတောင်ဘက် မဏ္ဍပ်ဆောက်ခွင့်ပါမစ် တစ်ဆင့်ရောင်းချမ...
အင်န်အယ်လ်ဒီနာယက ဦးဝင်းတင် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင...
ကိုရင်တစ်ပါး ရထားကြိတ်ခံရသဖြင့် ပျံလွန်တော်မူ
မိန်းကလေးများရဲ့ စကပ်အောက်ကို ဖုန်းနဲ့ ဗီဒီယိုခိုး...
HIV ကို အိမ်မှာ ကိုယ့်ဖါသာစမ်းသပ်နိုင်တဲ့ကိရိယာကို...
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်း...
သင့်ဘ၀အတွက် ပျော်ရွှင်မှု ရရှိစေမယ့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
Telenor က ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖုန်းခေါ်ဆိုစမ်းသပ်မှုအောင...
ကင်ညာ အစွန်းရောက် ဘာသာရေးဆရာ ပစ်သတ်ခံရ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များ မီဒီယာ၏ အသုံးချခံရသူမဖြစ...
မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှု၊ သုံးစွဲမှုတို့ဖြင့် တ...
Advice for Water festival သင်္ကြန်တွင်းကြ ယူကြုံးမရ ...
သင်္ကြန်ကို သူတို့တွေ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြမလဲ
အိုဘယ့်ခြသတ္တ၀ါများ သုံးသိန်းမကျော်စေနဲ့ စားသာစား
DVBသတင်းထောက်ကို မကွေးတရားရုံးက ထောင်တစ်နှစ်ချမှတ်
ဗန်ကောက်မြို့ Aksa လမ်းတစ်လျှောက် ရှပ်နီအဖွဲ့၏ အကြ...
Abortion or not ကိုယ်ဝန်ဖျက်တယ်ဆိုတာ
ကိုယ့်လက်ကိုဖြတ်ပြီး သားကိုလည်းသတ်ခဲ့သူနဲ့ မိတ်ဆွေ...
အဖြစ်နိုင်ဆုံး Black Box အချက်ပြမှု ဖမ်းမိ
လှည်းကူးတွင် ပုဒ်မ-၁၈၈ ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးပြစ်မှု...
၂၀၁၅ (သို့မဟုတ်) မြွေပွေးတစ်အုပ်ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်း
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ရန် မြစ်ဆုံအထိ လမ်းလျှောက်သူအချ...
မျောက်များ၏ ဗက္လာယ ပြုမူမှုကြောင့် ကမ္ဘာကျော်တစ်ဦြး...
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီ အများပြည်...
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ ရေသန့်ဗူး မရောင်း၊ ရေသန့်အခမဲ့ ရရှိ
လှည်းကူးပဋိပက္ခ ပါဝင်သူများ ဖမ်းဆီးရန် ကျန်နေသေး
လမ်းလျောက်ခြင်းကြောင့် အသက် ၁၀ နှစ်ပိုရှည်သူ
သမီးကလေးရွာသားများကို တပ်ထဲသို့ သွင်းမည်မဟုတ်ဟု ဒီ...
တရုတ်အာလူးကြောင့် ပြည်တွင်းအာလူးစိုက် တောင်သူများအ...
ဆိုင်ကယ်တူးဘောက်ထဲ ၀ှက်ယူလာသော တရားမ၀င် ပစ္စတို သေန...
မွေးလာတဲ့ကလေး ရုပ်ဆိုးလို့ ယောက်ျားဖြစ်သူက တရားစွဲ
မွေးရာပါရေတိမ်ပါတဲ့ အမွှာကလေးငယ်နှစ်ဦးအတွက် အကူအညီ...
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ ယ...
စစ်တပ်ပိုင် ဂန္ဓမာဟိုးဆေး စင်တာကို မီးအာမခံကြေး သိန...
ပျောက်ဆုံးမလေးလေယာဉ်ဆီက အချက်ပြလှိုင်းတွေကို အိန္ဒိယ...
ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးကို လက်ရှိကာလတွင် မလုပ်ဆောင်နု...
အသားစား ခြင်္သေ့ သို့သော် သနားကြင်နာတတ်သော သတ္တဝါ
ချစ်သူကောင်မလေးအတွက် ချစ်စဖွယ် စကားများ-၂
Nails and Health လက်သည်းနဲ့ ကျန်းမာရေး
ထိုင်းစူပါစတားများ အတွက် ဘာသာပြန်ပေးခဲ့လို့ ပရိသတ်...
ပလက်ဖောင်းပေါ် လမ်းလျှောက်နေသူတစ်ဦး ခရီးသည်တင်ဘတ်စ...
မလေးရှားလေယာဉ်ရှာဖွေနေစဉ် ဖမ်းယူရရှိသည့် အချက်ပြမှု...
အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်လာသည့် ၁၂ ဘီး ကုန်တင်ယာဉ်...
တရုတ်သင်္ဘောက အချက်ပေးသင်္ကေတ ထပ်ဖမ်းမိ
Modified Penis ပန်းအဖျား အဆန်းအပြားလုပ်ခြင်းများ -...
မသင်္ကာသူအား လိုက်လံစောင့်ကြည့်စဉ် ကားမှန်ခွဲ၍ ပစ္စည်...
အပစ်ခတ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေး ပွဲ နောက်တစ်ရက် ထပ်တိုး
မိတ်လိုက်ပြီး အထီးကိုပြန်စားသော မုဆိုးမ ပင့်ကူ
မြေသိမ်းခံရမှုကြောင့် မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆ...
တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီမှ ဒေသခံ မြန်မာလုပ်သားများ၏ အြေ...
စစ်တပ်ရဲ့မြေသိမ်းမှုကိစ္စ ဆန္ဒပြသူတွေ ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ခွင...
ကာချုပ် ရှမ်းပြည်နယ်ခရီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ...
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်လူငယ်ကွန်ယက်တို့၏ လူပ်ရှားမူ...
ယူကရိန်းအစိုးရရုံးတချို့ ရုရှားလိုလားသူတွေ စီးနင်းခံရ
အလုပ်ကို မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ကြိုးစားခြင်းကြောင့် ဖြ...